Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah:
Bizzoby ("Bizzoby") way shaqeysaa https://www.bizzoby.com/ waana laga yaabaa inay ku shaqeyso degello kale. Siyaasadda Bizzoby waa inay ixtiraamto arrimahaaga gaarka ah ee ku saabsan wixii macluumaad ah ee aan ururin karno inta aan ka shaqeyneyno degelladayada.
Sida inta badan hawlwadeenada websaydhka, Bizzoby waxay ururisaa macluumaad aan shaqsi ahaan loo aqoonsan nooca ay yihiin daalacayaasha shabakadaha iyo barnaamijyadu sida caadiga ah ay diyaar u yihiin, sida nooca biraawsarka, doorbidida luqadda, goobta tixraaca, iyo taariikhda iyo waqtiga codsi kasta oo soo booqde ah. Ujeedada Bizzoby ee aruurinta macluumaadka shaqsiyadeed ee aqoonsiga waa in si fiican loo fahmo sida booqdayaasha Bizzoby ay u adeegsadaan degelkeeda. Waqti ka waqti, Bizzoby waxaa laga yaabaa inuu sii daayo macluumaad aan shaqsi ahaan lagu aqoonsan wadarta wadarta, tusaale ahaan, isagoo daabacaya warbixin ku saabsan isbeddellada ku yimid adeegsiga degelkeeda.
Bizzoby wuxuu kaloo uruuriyaa macluumaad shaqsi ahaan lagu aqoonsan karo sida cinwaanada Protocol-ka Internetka (IP) ee loogu talagalay dadka isticmaala iyo isticmaaleyaasha ka tagaya faallooyinka https://www.bizzoby.com/ blogs / sites. Bizzoby kaliya wuxuu shaaca ka qaadaa inuu kujiro cinwaanada isticmaalaha iyo faallooyinka IP-ga isla duruufaha ay adeegsato isla markaana shaaca kaqaado macluumaadka shaqsi ahaan lagu aqoonsanayo sida hoos lagu sharaxay, marka laga reebo in cinwaanada IP-ga ee faallooyinka iyo cinwaanada emaylka la arki karo loona soo bandhigo maamulayaasha baloogga / goobta ay faallooyinka ka yihiin. ayaa hadhay.
Soo booqdayaasha qaarkood ee websaydhada Bizzoby waxay doortaan inay kula macaamilaan Bizzoby qaabab u baahan Bizzoby inay soo ururiyaan macluumaad shaqsi ahaan lagu aqoonsanayo. Qaddarka iyo nooca macluumaadka ay Bizzoby uruuriso waxay kuxirantahay nooca isdhexgalka. Tusaale ahaan, waxaan weydiinnaa dadka soo booqda ee iska diiwaangeliya https://www.bizzoby.com/ si loo bixiyo magaca isticmaalaha iyo cinwaanka iimaylka. Kuwa la macaamil ganacsi la leh Bizzoby waxaa laga codsanayaa inay bixiyaan macluumaad dheeri ah, oo ay ku jiraan sida loogu baahan yahay macluumaadka shaqsiyeed iyo maaliyadeed ee looga baahan yahay in lagu socodsiiyo macaamilladaas. Xaalad kasta, Bizzoby waxay ururisaa macluumaadka noocaas ah oo kaliya inta lagama maarmaanka u ah ama ku habboon si loo fuliyo ujeeddada isdhexgalka booqdaha ee Bizzoby. Bizzoby ma shaaciyo macluumaad shaqsiyan lagu aqoonsado oo aan ka aheyn sida hoos lagu sharaxay. Soo-booqdayaashu had iyo jeer way diidi karaan inay keenaan macluumaad shakhsi ahaan lagu aqoonsanayo, oo leh digniin ah inay ka hor istaagi karto inay ku lug yeeshaan waxqabadyo la xiriira degellada qaarkood.
Bizzoby waxaa laga yaabaa inay soo uruuriso tirakoobka ku saabsan habdhaqanka booqdayaasha degellada internet-ka. Bizzoby wuu soo bandhigi karaa macluumaadkan si guud ama wuxuu siin karaa kuwa kale. Si kastaba ha noqotee, Bizzoby ma shaaciyo macluumaad shaqsiyan lagu aqoonsado oo aan ka ahayn sida hoos lagu sharaxay.
Bizzoby wuxuu kashifayaa macluumaadka shaqsiyan lagu garan karo shaqsi ahaana lagu aqoonsan karo kaliya shaqaalaha, qandaraasleyda iyo ururada laxiriira ee i (i) ubaahan inay ogaadaan macluumaadkaas si looga baaraandego magaca Bizzoby ama loo bixiyo adeegyada laga heli karo websaydhada Bizzoby, iyo ( ii) kuwaas oo isku raacay in aan shaaca laga qaadin dadka kale. Qaar ka mid ah shaqaalahaas, qandaraasleyda iyo hay'adaha xiriirka la leh waxaa laga yaabaa inay ku yaalliin meel ka baxsan dalkaaga hooyo; adoo adeegsanaya websaydhada Bizzoby, waxaad ogolaatay in lagu wareejiyo macluumaadkaas iyaga ah. Bizzoby kama kireyn doono ama ka iibin doono shaqsi ahaan-aqoonsiga iyo shakhsiyaadka-aqoonsiga macluumaadka qofna. Marka laga reebo shaqaalaheeda, qandaraasleyaasha iyo ururada xiriirka la leh, sida kor lagu sharaxay, Bizzoby wuxuu shaaca ka qaadayaa suurtagalnimada shakhsi ahaan-aqoonsiga iyo shakhsi ahaaneed-aqoonsiga macluumaadka kaliya iyadoo laga jawaabayo amar maxkamadeed, amar maxkamadeed ama codsi kale oo dowladeed, ama markii Bizzoby uu si aaminnimo leh u sheegayo in shaacintu tahay macquul ahaan lagama maarmaan u ah ilaalinta hantida ama xuquuqda Bizzoby, dhinacyada saddexaad ama guud ahaan dadweynaha. Haddii aad tahay isticmaale diiwaangashan oo ka tirsan websaydhka Bizzoby oo aad soo dirtay cinwaanka emaylkaaga, Bizzoby ayaa mararka qaarkood kuu soo diri kara emayl si uu kaaga warramo astaamaha cusub, ka dalbo ra'yigaaga, ama kaliya kula socodsiiso waxa ka socda Bizzoby iyo annaga alaabta. Haddii aad noo soo dirto codsi (tusaale ahaan emayl ama mid ka mid ah farsamooyinka jawaab celintayada), waxaan xaq u leenahay inaan daabacno si ay nooga caawiso inaan caddeynno ama ka jawaabno dalabkaaga ama naga caawiso inaan taageerno isticmaaleyaasha kale. Bizzoby wuxuu qaadaa dhamaan talaabooyinka sida macquulka ah lagama maarmaanka u ah si looga ilaaliyo marinka aan la fasaxin, adeegsiga, wax ka badalida ama baabi'inta macluumaadka shakhsiyan lagu aqoonsan karo iyo shakhsiyan lagu garto.
Cookie waa macluumaad xariir ah oo websaydh ku kaydiya kombuyuutarka booqdaha, iyo biraawsarka booqdaha ayaa siiya websaydhka markasta oo booqdehu soo laabto. Bizzoby wuxuu adeegsadaa cookies si uu Bizzoby uga caawiyo aqoonsiga iyo la socoshada booqdayaasha, isticmaalkooda websaydhka Bizzoby, iyo dookha marin u helka degelkooda. Dadka soo booqda Bizzoby ee aan rabin in cookies lagu xiro kombiyuutarradooda waa inay dejiyaan daalacayaashooda si ay u diidaan cookies ka hor inta aysan isticmaalin boggaga internetka ee Bizzoby, iyadoo dib u dhac ku imaaneysa in astaamaha qaarkood ee websaydhada Bizzoby laga yaabo inaysan si sax ah u shaqeyn karin caawimaadda cookies-ka.
Haddii Bizzoby, ama si guud ahaan hantideeda oo dhan, la helay, ama haddii ay dhacdo suurtagalnimada in Bizzoby ka baxo ganacsiga ama galo musalafnimo, macluumaadka isticmaalaha ayaa noqon doona mid ka mid ah hantida ay wareejiyeen ama ay heleen dhinac saddexaad. Waad qiraysaa in wareejinta noocan oo kale ah ay dhici karto, iyo in iibsade kasta oo Bizzoby uu sii wadi karo inuu isticmaalo macluumaadkaaga shaqsiyeed sida ku cad siyaasaddan.
Xayeysiisyada ka soo muuqanaya mid ka mid ah degelladayada waxaa loo dhiibi karaa adeegsadayaasha la-hawlgalayaasha xayeysiinta, kuwaas oo dejin kara cookies. Kukiyadaani waxay u oggolaanayaan adeegaha xayeysiiska inuu aqoonsado kombuyuutarkaaga mar kasta oo ay kuu soo diraan xayeysiis khadka tooska ah ah si loo soo ururiyo macluumaadka adiga ama kuwa kale ee adeegsada kombiyuutarkaaga. Macluumaadkani wuxuu u oggolaanayaa shabakadaha xayeysiinta inay, iyo waxyaabo kale, ay soo gudbiyaan xayeysiisyo la bartilmaameedsaday oo ay rumaysan yihiin inay adiga adiga kuugu xiiso badan yihiin. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuu daboolayaa isticmaalka buskudka 'Bizzoby' mana daboolayo isticmaalka buskudka xayeysiistayaasha midkood.
In kasta oo isbeddelada badankood ay u badan tahay inay yaryihiin, Bizzoby waxaa laga yaabaa inuu beddelo Nidaamkeeda Khaaska ah waqti ka waqti, iyo ikhtiyaarka keliya ee Bizzoby. Bizzoby wuxuu ku dhiirrigelinayaa dadka soo booqda inay si joogto ah u baaraan boggan wixii isbeddel ah ee ku yimaada Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah. Haddii aad leedahay koonto https://www.bizzoby.com/, waxa kale oo laga yaabaa inaad hesho digniin kuu sheegaysa isbeddeladan. Isticmaalkaada joogtada ah ee degelkan wixii isbeddel ah ee ku yimaada Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waxay ka dhigan tahay aqbalaaddaada isbeddelka noocaas ah.